DOWNLOAD NDỊ ỌKWỌ ỤGBỌALA MAKA MY PASSPORT ULTRA - NDỊ ỌKWỌ ỤGBỌALA - 2019
PDF Pro bụ mmemme ọkachamara maka ịmepụta na ederede ederede PDF.
Akụrụngwa na-enye gị ohere ịmepụta PDF akwụkwọ site na faịlụ ederede, ihe oyiyi na HTML ibe. Tụkwasị na nke a, ị nwere ike ịmepụta faịlụ site na ibe weebụ site n'ịkọpụta adreesị Ịntanetị ya ma lee omimi.
Nbupụ na ntụgharị
Enwere ike ịbupu faịlụ nwere ma wezuga faịlụ gaa na otu n'ime usoro dị ugbu a ma gbanwee JPEG, TIFF na PNG. Usoro ihe omume ahụ, n'etiti ihe ndị ọzọ, nwere ọrụ nke mbupụ akwụkwọ gaa na Okwu, wee meghee ma dezie.
Na-agbakwụnye ma dezie ihe
PDF Pro nwere ike ịgbakwunye ma dezie ederede, ihe oyiyi, akwụkwọ mmado, stampụ na akara mmiri. Ịnwere ike ịgbakwunye n'ụdị na ibe - ịkọwapụta, na-emesi ike ma na-emepụta ihe, yana ịbịaru aka "Pensụl".
Tab "Fanye na dezie" enwere ọrụ ndị ọzọ maka ịrụ ọrụ na ihe - ngwaọrụ "Ellipse", "Rectangle" ma "Ube", nhọrọ iji tinye ọnụ ọgụgụ, njikọ na itinye akwụkwọ.
A na-echekwa PDF faịlụ ndị e kere n'usoro ihe omume ahụ site na okwuntughe, asambodo na ntinye aha. Na otu taabụ, ị nwere ike ịmepụta akwụkwọ, ihe njirimara dijitalụ, gbakwunye kọntaktị ndị dị mkpa na ndepụta a tụkwasịrị obi.
Ọrụ nke arụ ọrụ akpaaka na-enye gị ohere ịgbakwunye ihe dịgasị iche iche, ntụgharị gaa na ibe dị na clicks abụọ, setịpụ parameters maka akwụkwọ na nchebe ha. A na-etinye ihe ndị e kere eke na listi pụrụ iche ma enwere ike iji ya n'oge ọ bụla na ibe ọ bụla.
Iji belata nke nnukwu akwụkwọ, nakwa iji melite àgwà nke ihe oyiyi na ihe ndị ọzọ na ihe omume ahụ nwere ọrụ kachasị mma. Na ya, ị nwere ike ịhazi àgwà na mkpebi nke ihe oyiyi, zoo na-enweghị isi ma ọ bụ gosipụta ihe dị mkpa na ibe. A na-echekwa ntọala ndị a na preset maka iji ngwa ngwa.
Na-ezite site na e-mail
Ihe edere na PDF Pro nwere ike zipu dị ka agbakwụnye email. A na-ezipụ site n'iji onye ahịa email emejuputara na usoro dịka ihe ndabara, dịka ọmụmaatụ, Outlook.
Ọtụtụ atụmatụ maka akwụkwọ edozi;
Mgbatị faịlụ nchebe;
Akwụsị nke arụmọrụ oge;
Biputa faịlụ gaa na Okwu;
Mgbe ị na-ebuli faịlụ site na ibe weebụ, a naghị echekwa ụdị ụfọdụ.
A kwụrụ ụgwọ ahụ.
PDF Pro - software ndị ọkachamara na-arụ ọrụ na nnukwu ọrụ. Akpaaka na-enye gị ohere ime ụdị omume ahụ ngwa ngwa, na nchebe dị mma gbochie ndị agha site na iji ọdịnaya gị.
Download ikpe PDF Pro
PDF24 Onye Okike 7-PDF Onye kere Akwụkwọ mpịakọta Flair PDF ikpokọta
PDF Pro - usoro ihe omume maka ịmepụta, idezi na ịtụgharị akwụkwọ na PDF. Ọ nwere arụ ọrụ iji rụọ ọrụ na ime ka nchedo faịlụ chebe ndị omempụ.
Onye Mmepụta: Software Marketing Ltd
Ọnụ: $ 53